Miyuu Goolhaye Kepa Arrizabalaga sii joogayaa Kooxdiisa Chelsea, Maxaase ka soo kordhay dhinaca Blues? – Gool FM
(London) 26 Maajo 2020. Goolhayaha Kooxda kubadda cagta Chelsea ee Kepa Arrizabalaga ayaa la soo warinayaa inuu qarka u saaran yahay inuu baaqi ku sii ahaado garoonka Stamford Bridge wixii ka dambeeya xagaaga.
Xiddiga reer Spain ayaa soo maray xilliyo isku dhafan oo uu ka hoos shaqeeyay Tababare Frank Lampard xilli ciyaareedkan, waxaana booskiisa uu ku waayay gacmaha Willy Caballero ka hor karaantiilkii ay adduunyadu gashay sababo la xiriira faafaha Coronavirus.
Chelsea ayaa la sheegay inay raadineysay goolhayaha Jooxda Ajax ee Andre Onana si uu u noqdo bedelka suurtagalka ah ee Kepa, laakiin marka loo eego jawiga dhaqaale ee haatan jira, Blues ayaa la filayaa inay dib u qiimeeyaan istiraatiijiyadooda suuqa kala iibsiga xiddigaha.
Sida uu warinayo Warsidaha The Athletic, Chelsea ayaa aqbashay inaysan heli doonin iibsade ku habboon Kepa xagaagaan, sidaasi darteedna 25-sano jirkaan ayaa ku sii nagaan doona horyaalka Premier League.
Warbixinta ayaa sidoo kale sheegaysa in Kepa uusan dan weyn ka heleynin dibadda ka hor inta uusan dhicin masiibada Coronavirus, inkastoo la soo jeedinayey in Valencia ay dooneysay inay La Liga dib ugu soo celiso goolhayaha adduunka ugu qaalisan.
Kepa ayaa garoonka ka baxay isagoo lix jeer shabaqiisa gool ka ilaashaday 25 kulan oo Premier League ah xilli ciyaareedkan.